उपाशनालाई युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ बनाउन बीमा समितिमाथी दवाब, के गर्छ समितिले ? - Aathikbazarnews.com उपाशनालाई युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ बनाउन बीमा समितिमाथी दवाब, के गर्छ समितिले ? -
उपाशनालाई युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ बनाउन बीमा समितिमाथी दवाब, के गर्छ समितिले ?
२ वर्षमात्रै बीमा क्षेत्रमा काम गरेकी युनाइटेड इन्स्योरेन्स कामु सीईओ उपाशना पौडेललाई सीईओ नियुक्तीको सैद्धान्तीक सहमती दिन दवाव परेको छ ।
१ साताअघि मात्रै बीमा समितिले उपाशनालाई सीईओ नियुक्तीको सैद्धान्तिक सहमतीको तयारी गरेको थियो । तर २ वर्षमात्रै बीमाको अनुभव भएको पौडेललाई सीईओ बन्न लागेको खवर बाहिर आएपछि बीमा समितिले उपाशनाको चिठ्ठी होल्ड गरेको थियो ।
बीमा समितिले युनाइटेडका संचालकहरुलाई केही समयपछि उपाशनालाई नियुक्ती गर्नु भनेर रोकेको छ । १ वर्षअघि सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सबाट डेपुटी सीईओमा आएकी उपाशनाले रमेश भट्टराइको कार्यकाल सकिएपछि कम्पनी सम्हादै आएकी छिन ।
उपाशनालाई युनाइटेड भित्र्याउने निर्णयको विरोध जनाएका संचालक बुद्धकाजी श्रेष्ठले पनि कम्पनीबाटै हात धुनु पर्यो । उपाशनालाई १ वर्षअघि डेपुटी सीईओ बन्न रोकेका श्रेष्ठ अहिले सो कम्पनीको संचालकबाट हटाइएका छन ।
एशियन लाईफद्वारा मृत्यु दाबी वापत १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी
हिमालयन रिको सिइओमा रामामुर्ती नियुक्त
नेपाल बैंकको अगुवाईमा ४ वटा बैंकको ठूलो खोला जलविद्युतमा लगानी
अहिले इमान्दार बैंकरलाई पनि काम गर्ने वातावरण छैन
रंगशाला बनाउन अल्का अस्पतालले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई दियो २५ लाख